> Resource > Lugood > Sida loo hagaagsan Lugood si iPhone
"Waxaan iibsaday iPhone cusub nafteyda oo aanad garanayn sida loo hagaagsan Lugood si iPhone. Aan wax ka akhriyey threads qaar ka mid ah, laakiin waxa ay u muuqataa Lugood ee aan hadda la isticmaalayo waa ka duwan kuwa lagu tilmaamay in articles. Tusaale ahaan, ma arko iPhone hoos Qalabka dhinaca bidix ee Lugood. Halkii, waa ku xaq u sareeya. Walba oo soo jeedinaya? Thanks! "
Lugood yahay waajib ah in ay maareeyaan songs, videos, iyo Apple Lugood Store iibsadaan u iPhone. Iyo haddii aadan samayn wax barnaamijyadooda kale, waxa aad helaysaa in ay music u hagaagsan, videos, sawiro, eBooks, iwm, si aad iPhone isticmaalaan. Xaaladdan oo kale, waa in aad ogtahay sida ay u hagaagsan Lugood aad si aad iPhone. Kuwa soo socda waa tallaabooyinka loogu syncing Lugood (Lugood 11 ama ka dib) si iPhone. Lugood 11 ama ka dib ayaa haatan version ugu balaadhan looga isticmaalaa.
Tallaabada 1. Isku aad iPhone iyo abuurtaan Lugood
Connect aad iPhone la computer via cable USB ku timaadda iyo abuurtaan Lugood. Ka dib markii ay si guul ah ku xira, by default aad iPhone ka muuqan doontaa sare ee midigta ah Lugood. Markaas waa in aad guji View> Show galeeysid. Marka aan sidaa yeelno, aad arki doonaa in hadda aad iPhone waxaa soo bandhigay bar ka dhanka bidix ka yar Qalabka.
Tallaabada 2. nidaameed Lugood si iPhone
Riix si aad iPhone hoos Qalabka on Lugood galeeysid tagay. Ka dibna waxaad arki kartaa dhammaan info aad iPhone dhinaca midig ee suuqa. Laga soo bilaabo halkan, waxaad riixi kartaa qasabadaha si hagaagsan files, barnaamijyadooda, xiriirada, songs, filimada, TV muujinaysaa, Podcasts, Books, iwm ka Lugood si iPhone.
Waa mid aad u fudud in ay u hagaagsan Lugood si iPhone, soo maaha? Laakiin, si ay u fududahay in ay u hagaagsan Lugood si iPhone oo aan tirtiro files aad iPhone, fadlan hubi in aad iPhone kuma jiraan heeso, videos, eBooks, iwm, kuwaas oo aan ka jirin Lugood. Haddii aad soo bixi songs qaar ka mid ah, videos iyo sawiro si toos ah aad iPhone iyo cabsan Lugood iyaga masixi markii syncing, waa inaad raacdaa tallaabooyinka hoose si aad u hesho on your computer ama Lugood u gurmad.
Tallaabada 1. Soo qaado Wondershare TunesGo
Download TunesGo si aad u computer oo ku xidh. Waxaa Launch iyo xiriiriyaan iPhone la computer via cable USB ah. Hadda iPhone wax runningin ee macruufka 5 ama ama ka dib waxaa lagu taageeray. Afrer xira si guul ah, waxaad ka arki kartaa files iPhone waxaa lagu kala soocaa galay qaybaha oo soo bandhigay bidixda ee TunesGo uu furmo suuqa ugu weyn.
Tallaabada 2. Nuqul files ka iPhone in Lugood / computer
Hadda waxaad riixi kartaa Media (music, Podcasts, Lugood U lagu daro) oo Photo tab siday u kala horreeyaan si ay u arkaan files. Ka dibna dooro baahi loo qabo in files oo guji dhoofinta iyaga badbaadiya kombiyuutarka. Hadda music dhoofin karo Lugood Library labada Wondershare TunesGo (Windows) iyo Wondershare TunesGo (Mac) .
Fiiro gaar ah: TunesGo sidoo kale kuu ogolaanaya in aad nuqul ka videos, playlists la play iyo dacwadood ratings ka iPhone in computer sidoo kale. Haddii aad iyaga dhoofiyo Lugood Library, waqtiga soo socda, waxaad si fudud iyaga u hagaagsan karaan in ay mar kale iPhone via Lugood.